Microsoft inoburitsa kodhi yekushandisa sosi uye inoshanda mubrowser nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakangotora nhanho padyo kune yemahara software Zvakanaka, mushure mekusunungura makodhi enzvimbo, kutenga GitHub, uye kugadzira yako yega vhezheni yeLinux, kumwe kushamisika kwakauya.
Iyo kambani zvakare yakazivisa kuti Windows Mafomu, WinUI (Windows UI Raibhurari) uye WPF (Windows Presentation Foundation) zvino ichave yakavhurwa sosi.
Naizvozvo, Microsoft inoburitsa kodhi yekodhi yezvimwe zvinoshandiswa Pamwe chete neNET Core 3.0 Preview vhezheni, izvi ndizvo zvakaziviswa naMicrosoft muchikamu cheConnect 2018 Musangano.
Izvo kunze kweizvi, Microsoft urikusiira aya maWindows UX masystem. WPF, Windows Mafomu uye WinUI izvozvi zvava kuwanikwa neiyo yakazara sosi kodhi kubva kuGitHub.
1 Microsoft irikugadzira webhu bhurawuza nyowani
1.1 Microsoft inoronga kutora Edge
1.2 Microsoft uye Docker
Microsoft irikugadzira webhu bhurawuza nyowani
Uyewo, Kune runyerekupe rwekuti Microsoft yakafunga kupedza yayo Edge browser uye pachinzvimbo iyo kambani ichave ichigadzira imwe browser zvachose yakavakirwa paChromium sezvo Edge yaionekwa semukundikani pakati pevashandisi.
Iyi nyowani webhu bhurawuza iyo yakarongerwa kutumira nekutadza mukati Windows 10 pachinzvimbo cheEdge.
Iyo purojekiti inogadzirwa pasi pekodhi zita "Anaheim" uye inozivikanwa nekuchinjira kune yemahara Chromium chirongwa chekuvandudza pane kugadzira yayo yeEdgeHTML browser injini.
Sekureva kwemishumo mitsva yakatanga kuoneka muWindows Central, bhurawuza haritore nguva kuti ibude sezvo Microsoft inogona kuzivisa kutsiva kwayo svondo rino.
Hazvizivikanwe pasi pechiratidzo chitsva icho browser chinopihwa uye kana iyo mushandisi interface ichachinja.
Izvo zvinokwanisika kuti iyo nyowani browser ichaunzwa seyakakura yekuvandudza yeEdge uye kuti icharamba ichiendeswa pasi pezita rimwe chete, uku ichichengetedza izvo zvakakosha zvinhu zveiyo interface.
Semuenzaniso, iyo iOS uye Android shanduro dzeEdge hadzitangi kushandisa EdgeHTML, asi pachinzvimbo shandisa zvakajairika webhu zvemukati zvinopa injini zvinopihwa ne mobile mafoni.
Microsoft inoronga kutora Edge
Icho chikonzero chekukanganisa kweEdge kuvandudza ndiko kushomeka kwakakurumbira kweiyi browser pakati pevashandisi uye vagadziri vewebhu.
Zvizhinji zve Windows 10 vashandisi vari kuchinjira kuChannel nekuda kwekugara kwakagadzikana uye nenyaya dzekuita paEdge.
Zvinoenderana nepasirose yepasi rose app, mugove weEdge mugore wakaderera kubva pa4.61% kusvika pa4.34%, mugove weFirefox uri 10%, Internet Explorer - 11.19%, Chrome - 63.6%
Iyo browser yeChromium-inoenderana inogona kunge iine zvakawanda zvinoshanduka kana kambani ikasarudza kuisa zvese mumukwikwidzi weChbookbook, pachinzvimbo chekushandisa yakareruka vhezheni yeWindows 10. Musiyano webrowser kubva kuGoogle Chrome ichava imwe nyaya.
Microsoft inoda kuita basa rakawanda munzvimbo ino kana ichida kuwanazve mugove wakasimba wemusika une mabhurawuza eGoogle.
Zvakanaka, kwemakore mazhinji haina kumbobvira yawana kugutsikana kubva kune vashandisi vayo, nekuti inoisa parutivi matekinoroji eminiti yekupedzisira isina kupa rutsigiro rwakananga (chimwe chinhu icho vakwikwidzi vayo vakashandisa zvakanaka kwazvo).
Zvinoenderana nenhamba dzichangoburwa, Chrome inodzora inopfuura hafu yepasirese webhurawuza rewebhu.
Microsoft uye Docker
Uye iwo mapurojekiti anoitirwa yakavhurwa sosi haamire ipapo. Microsoft naDocker vakazivisa yakavhurwa sosi projekiti, Cloud Native Chikumbiro Bundle (CNAB).
Icho chinangwa ndechekuti zviite nyore kubata iyo lifecycle yegore-yemuno kunyorera.
Mukukosha, CNAB hapana chimwe kunze kwekutsanangurwa iyo inobvumidza vanogadzira kuti vataure kuti chikumbiro chinofanira kurongedzwa nekumhanyisa sei.
Nezvo, vagadziri vanogona kutsanangura zviwanikwa zvavo uyezve voendesa kunyorera chero chinhu kubva kunzvimbo yemuno yekushandira kusvika kuruzhinji makore.
Rondedzero iyi yakaberekerwa mukati meMicrosoft. Asi timu yakataura naDocker, sezvo mainjiniya eDocker aishanda pachirongwa chakafanana.
Ivo vaviri vakasarudza kujoina masimba uye kusunungura mhedzisiro seyakavhurwa sosi purojekiti.
Rinenge gore rapfuura, takaona kuti tese tiri vaviri takashanda chinhu chimwe chete, "akadaro Gabe Monroy, Microsoft. Isu takafunga kubatanidza mauto toaisa pamwechete seyakajairwa indasitiri, yakawedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inowedzera chinzvimbo chayo mune yakavhurika sosi uye inoshanda pane nyowani browser
Uye bhora riripi? ...